Ciidamada AMISOM oo Lacago weydiistay Dowladda Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Ciidamada AMISOM oo Lacago weydiistay Dowladda Soomaaliya
Muqisho (KON) - Dhawaan Imaaraadka Carabta waxaa uu Dowladda Soomaaliya ku wareejiyay Deeq Raashin ah oo loogu talo galay in lagu caawiyo Dadka Abaaraha ay saameeyeen iyo kuwa ku nool Deegaanada ay Al-shabaab go’doomiyeen.
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka Xukumadda Soomaaliya C/laahi Godax Barre ayaa sheegay in Raashinkaasi la geeyn doono Dhamaan Goobaha ay Abaaruhu ka jiraan oo Xoog lagu marsiin doono dhulka Al-shabaab ay ku xoog badan yihiin.
Sidaa oo ay arrintu tahay ayaa Wasaarada Arrimaha Gudaha waxaa la sheegay in ay Diyaarisay 23 Baabuur oo ah Nuuca Xamuulka qaada islamarkaana loogu talagalay in ay Gargaarka saran la gaarsiiyo Gobolada Baay, Bakool iyo Gobolka Hiiraan, halkaa oo ay ka jiraan Abaaro Xoogan.
Raashinka ayaa la sheegay in AMISOM Wasaaradu ay ku wareejisay si ay u Galbiyaan, iyadoona AMISOM lagala kulmay hadal aan la fileyn oo ah in ay Calaa Gaari ka rabaan lacag ay ku gudbiyaan, inkastoo Cadada lacagtaasi aan la sheegin.
Sarkaal ka tirsan Wasaarada Arrimaha Gudaha gaar ahaan qeybta Gargaarka ayaa Arrintaas Keydmedia Online u sheegay, waxaana uu tilmaamay in Wali Raashinkii uu Xaniman yahay oo aan la qaadin.
Dad badan oo ku nool Magaalada Muqdisho ayaa la yabay arrintaan, maadaama AMISOM ujeedka Soomaaliya u joogto ay tahay in ay Taageeran Dowladda iyo Shacabkeeda.
Waxaana Lacagtaan AMISOM ay Dowladda weydiisatay ay imaaneeysaa xili la sheegay in Ciidamada AMISOM ee ka socda Dalka Uganda aysan mudo 6-Bilood ah wax Mushaar ah qaadan.